I-OnePlus 6T ayizukuba nesihlanganisi seJack esingu-3.5 mm, ngokwemeko yayo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Iqinisekisiwe: i-OnePlus 6T iya kuthi ndlela-ntle kwisihlanganisi se-3.5mm Jack audio, ngokwemeko yayo
Kuninzi okutshiwo malunga ne-OnePlus 6T, i-smartphone elandelayo evela kwinkampani eza kufika kungekudala, nangona kungaziwa ukuba ngubani kanye kanye. Phakathi kwamarhe amaninzi ukuba ivelise, ulwazi oluthembekileyo luye lwaveliswa, njengolo lubonisa oko ayizukuba nesihlanganisi somsindo wejack eyi-3.5 mm.
Oku bekubonakalisiwe ngaphambili, kodwa ngoku, ukuvuza okutsha kuyakuqinisekisa oko. Ityala leflegi elandelayo yoluhlobo lusixelela ukuba ayizukubanezi zibuko lidumileyo, ikwayiloo nto ifunyanwa kuninzi lwee-mobiles ezikhoyo ngoku kwintengiso.
Ngokwangoku, okusandula ukwaziswa ngu SlashLeaksNjengokunikezela, isiphelo esiphakamileyo asinaso isinxibelelanisi esikhankanywe apha ngasentla. Ngapha koko, ityhila oko Ikhamera emibini yangasemva ilungelelaniswe nkqo kunye nesibane se-LED, eyahlulwe kancinane kuyo. Ukongeza, icebisa kuthi ukuba ayizukufumana mfundi wokufunda ngomnwe ngasemva. Okokugqibela kungenxa yenyani yokuba iya kuba yifowuni yokuqala yenkampani ukuba umfundi ayakhele kwiscreen.
Imifanekiso ikwabonelela ngolwazi malunga namaqhosha. Umda osekunene we-OnePlus 6T yecala elicacileyo linokusikwa kwesilumkiso seSilumkiso kunye nesitshixo samandla, ngelixa amaqhosha evolumu ekhohlo.
Kuninzi okulindelweyo kwesi sigxina. Amarhe acebisa ukuba inokuza nescreen se-FullHD + se-AMOLED kuyilo Umgxobhozo wamanzi, ngohlobo lwe Oppo F9. Kukwalindeleke ukuba kuxhotyiswe iprosesa ye-octa-core Snapdragon 845 processor, i-8 GB ye-RAM kunye nendawo yokugcina yangaphakathi ye-256 GB. Ukongeza, kuye kwathiwa ukuba intetho yayo inokwenzeka phakathi ku-Okthobha; ngokukodwa, nge-16 ezayo ye-Okthobha. Kuyo zonke iinkcukacha malunga nale fowuni ziya kunikwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iqinisekisiwe: i-OnePlus 6T iya kuthi ndlela-ntle kwisihlanganisi se-3.5mm Jack audio, ngokwemeko yayo
Ifowuni entsha ye-Honor imalunga nokufika kwintengiso
Yiba ukutya okuziinkozo kubaphambukeli kwiiLops zasemoyeni zokuzonwabisa